Convair 990A & FSX sano 3 4 bilood ka hor #155
Waxaan ahay Fanaan aad u weyn oo ka mid ah Shirarka 880 & 990. ayaa isku dayey in uu helo mid la rakibay VC bilooyin dhowr ah oo aan nasiib lahayn. Ma jiraa 880 ama 990 oo leh VC oo ay doonayaan inay wadaagaan. Waxaan isku dayey inaan ku dhejiyo kuraasta HJG laakiin marnaba kuma soo bandhigin ciyaarta. Kadib dhowr mar oo isku day ah in ay shaqo ku helaan waxaan ugu dambayntii iska dhigtay tan iyo markii aysan haysan VC kasta. Maalintii kale waxaan helay mid ka mid ah bogga Virtual Airline oo rinjiyeynaya horraantii 60 ee AA Rinjiga wuxuu muujinayaa ciyaarta, laakiin ma jirto VC. Anigu ma ahan faylka feylka ah ee weli wali baran laakiin waxaan arkay posts ku saabsan ku darista VC in ay diyaarado la socdaan sidaas darteed waxaan kaliya ku fekeray haddii qof halkan uu ogyahay sida loo sameeyo arrintan ama wuxuu i toosin karaa meesha aan ku baran karo nidaamkaan. Waad ku mahadsantihiin Horumarka
Convair 990A & FSX sano 3 4 bilood ka hor #156
Convair 990A & FSX sano 3 4 bilood ka hor #158
ok xaggee baad ka heli beauty this ???
Waa inaan iyada ku dar si My ururinta!
Sida dhibaatada VC ah, aan si daacad ah ma aqaano nin. Waxaan marnaba daacad ah taageere weyn VC haddii ay tahay in ay CS C-130 ama 707
Convair 990A & FSX sano 3 4 bilood ka hor #159
post Lemme ee Group FB baan ku ahay .... waxaa laga yaabaa in qof ogaan doontaan!
Convair 990A & FSX sano 3 4 bilood ka hor #163
Virtualaal.weebly.com/fleet.html Tani waa meesha aan ka helay download ka.
Convair 990A & FSX sano 3 4 bilood ka hor #164
Ya og ... waxaan isticmaali kartaa a duuliye wanaagsan yar haddii aad xiisaynayso
Convair 990A & FSX sano 3 4 bilood ka hor #166
Aad ayaan ugu fiicanahay FSX Uma ixtiraamayo naftayda sidii duuliye wanaagsan. Laakiin waxaan xiiseynayaa in aan wax qabto inta aan ku sii socdo sim. Mareykankuna waa Diyaaradda aan Jeclahay ee Diyaaradaha hore iyo rinjiga. Waligaa Ma Og ..
Convair 990A & FSX sano 3 4 bilood ka hor #167
ilaa iyo inta aad ka heli kartid hal dhibic si ay u tilmaamaan b, iyo shumin karaan runway ku soo degtey, waxa aad ku fiican tahay lol. hadda diyaarad ugu da'da weyn waxaan leenahay waa Boeing Clipper 314
labaad ugu da'da weyn noqon lahaa 707 ah
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: FCAIR
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.395